RW Cumar Cabdirashiid oo gelinki danbe Maanta Garoowe soo gaaray – Radio Daljir
RW Cumar Cabdirashiid oo gelinki danbe Maanta Garoowe soo gaaray
Luulyo 13, 2015 2:50 g 0
Isniin, Luuliyo 13, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gelinkii dambe waxaa uu ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalo madaxda Puntland ee Garoowe Raysal-wasaaraha Dawladda Federaaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminayo.
Soo dhaweynta Raysal-wasaaraha waxaa sidookale ka soo qeyb-galay Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad, Siyaaasiyiin, Aqoonyahan, Haween , Dhalinyaro iyo masuuliyiin kale oo diyaar garow xoogan ugu jiray Soo dhaweynta Raysal-wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid.
Markii uu sidiiran loogu soo dhaweeyey Garoonka waxaa loo soo gudbiyey aqalka madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe, waxaana halkaas shir jaraa\_’id ku qabtay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Raysal-wasaare Cumar Cabdirashiid.
\_’\_’ Waxaa sharafweyn noo ah maanta inaan soo dhaweyno Raysal-wasaaraha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo nagu soo gaaray socdaal yar oo gaaban , waxaana uu raysal-waasaruhu u yimi inaanu kawada tashano xiriirka Dawladda Puntland iyo Federaalka \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Dawladda Puntland ay waxbadan ka tabanayso Dawladda Federaalka Soomaaliya, taasi oo ay ugu weyntahay jebinta hashiisyadii ay wada gaareen iyo ku tumashada Dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka u dagsan.
\_’\_’ Raysal-wasaaruhu waa noo yimi marka waxaan ka rabnaa su\_’aalaha tirada badan ee dadka reer Puntland qabaan inuu nooga jawaabo , waxaana rajeyn in is aragayaga waxbadan ka badali doono jewi taagan \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Raysal-wasaaraha Dawladd Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharamaarke ayaa dhankiisa muujiyey inuu si aad ah ugu faraxsanyahay imaanshihiisa Puntland iyo sida gobanimada leh ee loogu soo dhaweeyey.